လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် နောက်ခံသမိုင်း
၁။	၁၈၈၅ ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ တတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ဝင်ရောက်လာစဉ်ကပင် နယ်မြေဒေသပိုင်းခြားတိုင်းတာခြင်း၊ မြေခွန်တော် သတ်မှတ်စည်းကြပ်ခြင်း၊ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်မှုများ စာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့် သီးနှံမှန်းခြေစာရင်းများ ပြုစုထုတ် ပြန်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းဖြင့် စတင်သန္ဓေတည်ပြီး ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် မြေစာရင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကာ ၁၉၀၅ ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ “ ကြေးတိုင်၊ မြေစာရင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန” ဟူ၍ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၀၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ခွဲထွက်သွားသဖြင့် “ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန ” ဟူ၍ သီးခြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။
၂။	ထို့သို့ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနအဖြစ် နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော် ရပ်တည်လာပြီးနောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၈-၄-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၁၃/၂၀၁၅ အရ “ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ” ဟု အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
၃။	ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအား (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန အနေဖြင့် (၂၀၀၇-၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်များဖြင့် ရမည်းသင်ခရိုင်မှ ခွဲထုတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် (၂၀၀၉-၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်ခရိုင်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနအဖြစ် လည်းကောင်း၊ (၂၀၁၀-၂၀၁၁)ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် နေပြည်တော် ခရိုင်အဆင့်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံး အဆင့်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရုံး(၁)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၂)ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး(၈)ရုံးနှင့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံး(၁)ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ခွင့်ပြုအရာထမ်းအင်အား (၁၅)ဦး၊ ခွင့်ပြု အမှုထမ်းအင်အား (၃၀၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၃၁၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနနှင့် ခရိုင်/ မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံးများ၏ ၀န်ထမ်းအင်အား ခွင့်ပြု၊ ခန့်ထား၊ လစ်လပ်မှုအခြေအနေ
စဉ် ရာထူး ခွင့်ပြု ခန့်ထား လစ်လပ်
၁ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ၁ −
၂ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ၄ ၄ -
၃ ဦးစီးအရာရှိ ၁၀ ၇ ၃
၄ ဒုဦးစီးမှူး ၁၁ ၁၁ -
၅ စာရင်းကိုင်-၂ ၁ ၁ -
၆ အကြီးတန်းစာရေး ၁ ၁ -
၇ စာရင်းကိုင်-၃ ၉ ၄ ၅
၈ လ/ထဦးစီးမှူး(စစ်ဆေးရေး) ၃၉ ၃၃ ၆
၉ လ/ထဦးစီးမှူး(အမှုတွဲ) ၁၂ ၈ ၄
၁၀ အငယ်တန်းစာရေး ၇ ၁ ၆
၁၁ စာရင်းကိုင်-၄ ၇ ၂ ၅
၁၂ ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး(စစ်ဆေးရေး) ၃ - ၃
၁၃ ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး(အမှုတွဲ) ၆ ၂ ၄
၁၄ မြေတိုင်း-၄ ၁၄၅ ၅၅ ၉၀
၁၅ ငယ်/လက်နှိပ်စက် ၁၂ ၃ ၉
၁၆ မြေတိုင်း-၅ ၁၆ ၈၄ ၆၈
၁၇ ယာဉ်မောင်း-၅ ၂ - ၂
၁၈ ရုံးအကူ ၂၁ ၂ ၁၉
၁၉ ရုံးအစောင့် ၁၂ ၂ ၁၀
စုစုပေါင်း ၃၁၉ ၂၂၁ ၉၈
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။	လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က)မျှော်မှန်းချက် (Vision)
လယ်ယာကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် မြေအသုံးချမှု ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးရေး၊
(ခ)	ရည်မှန်းချက် (Mission)
(၁)	မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား အခြေခံ၍ ခိုင်မာသော သတင်းအချက်အလက်စနစ် ထူထောင်ရေး
(၂)	ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက်စနစ် ထူထောင်ရေး
(ဂ)	မူဝါဒ (Strategy)
(၁)	မြေတိုင်းတာ၍ မြေပုံများ ပြည့်စုံစွာထားရှိရေးနှင့် မြေကြီး၊ မြေပုံ၊ မြေစာရင်း မှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး
(၂)	သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုစာရင်းများ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး
(၃)	မြေယာအသုံးချမှုစာရင်းများ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး
(၄)	လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထူထောင်ရေး
(၅)	လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး
(၆)	ကြေးတိုင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေး
(၇)	လယ်ယာစီးပွားစစ်တမ်းများ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး
(၈)	စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ပေးရေး
(၉)	ဌာနလုပ်ငန်းများအတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ လေ့ကျင့်၊ ပြုစု၊ ပျိုးထောင်ရေး
(ဃ)	လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Main Function)
(၁)	ဌာနတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကွင်းမြေပုံများအား ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံများအဖြစ် ပြောင်း လဲနိုင်ရေးအတွက် မြေတိုင်းတာခြင်း၊ မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို နှစ်အလိုက် စီမံချက်များချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၂)	လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ခြင်း
(၃)	မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ခြင်း
(၄)	ဌာနမှတိုင်းတာသည့် မြေပုံများ၊ လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ထူထောင်ခြင်း
(၅)	လယ်ယာမြေနှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတွင် မိမိဌာနဝန်ထမ်းများ ဥပဒေသတ်မျတ်ချက်နှင့်အညီ ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၆)	ကြေးတိုင်လုပ်ငန်းများ ကြေးတိုင်လက်စွဲပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၇)	လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောလူမှုစီးပွားရေးစစ်တမ်းများနှင့် လယ်ယာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ ခြင်း လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ကောက်ယူပြုစုခြင်း
(၈)	စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(၉)	ဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
၅။	လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
(ခ)	၂၀၁၂ ခုနှစ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
(ဂ)	ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ
(ဃ)မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်များ
(င)	The Boundaries Act (India Act 5.1800, Vol.IV)
(စ)	The Registration Act (India Act 16.1908, Vol.X)
(ဆ)တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ
(ဇ)	မြန်မာနိုင်ငံတော်အောက်ပိုင်းမြို့ရွာရှိ မြေရာလက်စွဲဥပဒေ
(ဋ)ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
(ဌ)The Money Lenders Act 1945 ( တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ပစ္စည်း များပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို အရေးယူသည့် ဥပဒေ၊ ဥပဒေအမှတ်-၃/ ၁၉၈၆ )
(ဍ)The Limitation Act (India Act. 5. 1908, Vol XII
(ဎ)	မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ပထစ ဥပဒေအမှတ်၊ ၅၀/ ၂၀၁၅)
(ဏ)မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ်-၁/ ၁၉၈၇)
(တ)နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှတ်ချက် ဥပဒေ
(ထ)The Myanmar Stamp Act (India Act.2.1989 Vol.III)
(ဒ)The Land Customs Act (India Act.19.1924 Vol.III)
နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနနှင့် ကွပ်ကဲမှုအအောက်ရှိ ခရိုင်/ မြို့နယ်ရုံးများ၏ ရုံးဓါတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ
၆။	နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန အပါအဝင်လက်အောက်ခံ ရုံးများ၏ အဆောက်အဦးဓါတ်ပုံများအား နောက်ဆက်တွဲ(က)မှ (ဋ)ထိဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး၊ ရုံးဖွင့် လှစ်ထားသည်နေရာများ၏ ရုံးလိပ်စာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စဉ် ရုံးအမည် ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုနှင့် ရုံးလိပ်စာများ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
၁ နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းနှင့် ကောင်စီလမ်းထောင့်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၆၇-၅၅၀၁၈၀
၂ နေပြည်တော်စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းနှင့် ကောင်စီလမ်းထောင့်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၆၇-၅၅၀၀၅၇
၃ ဥတ္တရခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ချင်းတွင်းလမ်းဘေး၊ ဥတ္တရခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစုပေါင်းရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၆၇-၅၅၀၁၈၀
၄ ဒက္ခိဏခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းနှင့် ကောင်စီလမ်းထောင့်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ဒက္ခိဏခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၆၇-၅၅၀၁၈၀
၅ တပ်ကုန်းမြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန စည်ပင်လမ်း၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့။ ၀၆၇-၇၀၀၀၈၊၀၆၇-၇၀၁၄၈
၆ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းဟောင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၅၇/၅)၊ ရွှေတွင်းကုန်း ကျေးရွာအနီး၊ ဇေယျာသီရိမြို့။ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၉-၄၉၁၀၂၆၄၂
၇ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန Ocean ရှေ့၊ ရွာတော်လမ်း၊ ဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့။ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၉-၄၉၁၀၂၆၃၉
၈ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန သီရိမဏ္ဏိုင်လမ်းနှင့် ချင်းတွင်းလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့။ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၉-၄၉၅၈၅၉၆၆
၉ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ရုံးလမ်း၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ ရန်အောင်(၁) ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့။ ၀၆၇-၂၂၁၁၉
၁၀ လယ်ဝေးမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ လယ်ဝေး - နေပြည်တော်လမ်း၊ လယ်ဝေးမြို့။ ၀၆၇-၃၀၃၇၃
၁၁ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းနှင့် ကောင်စီလမ်းထောင့်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနရုံး၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၉-၄၉၁၀၂၆၄၁
၁၂ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ရုံးပေါင်းစုံပတ်လမ်း၊ ရန်အောင်မြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်။ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ရုံးပေါင်းစုံပတ်လမ်း၌ သီးခြားဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀၉-၄၉၁၀၂၆၅၂
လယ်ဝေးမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန